Xildhibaan Cabdisalaan “MD Lafta-Gareen kuma balamin Xilka uu ii magacaabay, mana ogolaan karo” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdisalaan Cabdullaahi Yalaxow oo shalay loo magacaabay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaadiidka Cirka iyo dhulka ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iska Casilay Xilkaasi kadib markii uu sheegay in ay u soo jeediyeen odayaashiisa dhaqanka iyo siiyaasiin KG ka soo jeeda.
Cabdisalaan oo la soo xiriiray Kalfadhi ayaa sheegay in Xilka loo magacaabay uusan ku qancin, sidoo kalane aysan ku qancin dadka uu matalo sidaas darteedna uu go’aansaday inuu iska Casilo Xilka Wasiir ku xigeen ee shalay loo magacaaabay.
“Anigoo ah Cabdsalaan C/llaahi Yalaxow waxaan idin soo wacay in aan iska Casilo Xilka Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaadiidka Cirka iyo Dhulka ee KGS” ayuu ku yiri Cabdisalaan C/llaahi, Wareysi uu siiyay Kalfadhi. “Kuma qanacsani Xilkaan mana ahan mid ka tarjumaya awood qaybsiga KG, odayaashayda ayaa ii soo jeediyay in aan iska casilo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdisalaan C/llaahi Yalaxow.
Cabdisalaan Cabdullaahi Yalaxow oo ah Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen ay u doorteen inuu cadaalad ku maamulo KG xalna u raadiyo tabashooyin ay qabeen dadka degaanka balse sidaan aysan ka fileynin dadka uu matalo Xildhibaanka.
“Kama fileynin sidaan Madaxweynaha waxaan u dooranay inuu xaliyo tabashooyin aan qabnay” ayuu yiri Xildhibaan Cabdisalaan. “Ka hor inta aan lay magacaabin Xilkaan waan la fariisaty Madaxweynaha waana ku wargelinay sida ay wax u jiraan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdisalaan C/llaahi Yalaxow.
Waa wasiirkii ugu horreeyay ee iska casila Xilkii loo magacaabay kadib dhismaha Golaha Wasiirada ee Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-Gareen). Shalay ayuu Madaxweynaha soo dhameestiray Golahiisa Wasiirada oo gaaraya ilaa 50 Wasiir.
Xildhibaan Cabdifitaax "Waa in dadweynaha laga qayb geliyaa qabyo tirka Dastuurka, lana soo daadajiyaa dhameestirkiisa"